Gluten: Otu oka si emebi ugbu a - Julien Venesson - AFRIKHEPRI
Gluten: Olee otú ọka wheat taa si eme anyị - Julien Venesson
chie, Julaị 7, 2020
Kedu ka ọka wit taa si egbu anyị
ÊO doro gi anya na oka wit diri gi nma?
Ndị ọrụ gọọmentị, ndị na-ahụ maka ihe oriri na-edozi ahụ na ndị na-emepụta nri na-agba gị ume ịalsụ ọtụtụ ọka, "maka ahụike gị". Ihe nyocha nke Julien Venesson gosipụtara, na ntụle, na site na iwepu ọka wit na nri gị, ị ga-enwe ahụ ike. Iji belata agụụ na ụwa na ịba ụba nke ihe, ndị na-ahụ maka ọdịnala agbanweela mkpụrụ ndụ ọka. Ha mụrụ ụmụ ụdị dị egwu, Frankenblés: wheats ndị a nke oge a na-aba ụba karịa nri karịa ụdị nna nna taa.Oru, ihe ruru mmadụ atọ n'ime mmadụ ga-akpachapụ anya na protein a. Dọkịta agaghị echetụ n'echiche na ọka wit na-akpata ike ọgwụgwụ, nri digestive na nsogbu nke isi ọwụwa, isi ọwụwa, osteoarthritis, dizziness, neuropathies, or pain mgbu! Ma… ọ dị njọ karị: n'ime ndị nwere ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa, gluten na-eme dịka onye na - egbochi ọrịa autoimmune: oria celiac, oria Crohn, otutu sclerosis, oria 1, oria rheumatoid…
Akwụkwọ a na-enye gị nchịkọta nke nchọpụta sayensị na gluten na mkparịta ụka nkịtị na ndị ọkachamara n'ọhịa. Ọ na-enye gị karịsịa mkpịsị ugodi iji chebe ma ọ bụ nwetaghachi ahụ ike. Ọ bụrụ na ọgwụ agaghị agwọ gị, ọ nwere ike oge ịjụ ajụjụ ị na-eri.
Gluten - Otu ọka wit nke oge a si emebi anyị (MEN.PROP.)
10,99€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 10,99 €
Zụta € 10,99
ka nke ọnwa Julaị 7, 2020 7:33
Ụbọchị mwepụta 2013-12-04T00:00:00.000Z
Publication Ụbọchị 2013-12-04T00:00:00.000Z
Inye njem - Matthieu Grobli
Lelee Lumumba (2000)
Afrikhepri Foundation sur Oku nke Thomas Sankara maka mkpebi onwe ya: "Anyị ga-agbanye mkpọrọgwụ anyị, laghachi na isi mmalite nke mmụọ na nke akụkọ ihe mere eme iji nwetaghachi ike anyị" Jul 7, 12:52
Afrikhepri Foundation sur Gịnị kpatara mba Africa ji akwụ ụgwọ ụtụ isi na France n'agbanyeghị nnwere onwe ha?: "Mba ohuru "onwe ha" ga-akwụ ụgwọ maka ihe owuwu nke French na mba ahụ wuru n'oge ọchịchị." Jul 7, 12:49
Afrikhepri Foundation sur N’Ijipt oge ochie, a na-akpọ ndị mkpọrọ “skr-cnh” nke pụtara “n’agha“: "Ndị Africa eguzogidewo azụmaahịa ohu mgbe niile. Ọgụ ha busoro ndị na-azụ ahịa ohu kpatara mbibi niile ..." Jul 7, 12:43
Pịa aka ịhapụ ngalabax